Times24 Nepal » प्रदिपको गीत बन्न अञ्जलीको अडिसन यस्तो थियोे ? (भिडियो सहित)
प्रदिपको गीत बन्न अञ्जलीको अडिसन यस्तो थियोे ? (भिडियो सहित)
यतिबेला प्रेम गीत ३ को खुबै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । नया संगै पुराना पुस्ताको जम्बोटोली सहित प्रि प्रोडक्सनमा रहेको प्रेम गीत ३ टिम यतिबेला फिल्मको गीत क्यारेक्टरका कारण पनि निक्कै चर्चामा छ । सो क्यारेक्टरका लागि अडिसन आव्हान गरिएको थियो । २७ सयभन्दा बढी युवतीहरु अडिसनमा सहभागी थिए भने जसमध्ये एक थिइन् सबैमाझ परिचित अन्जली अधिकारी । हेर्नुस उनले यसरि दिएकि थिइन् अडिसन ।